लागत कसरी नियन्त्रण गर्ने? | Hamro Patro
लागत कसरी नियन्त्रण गर्ने?
Bishwa Raj Adhikari - Jun 06 2018
हामी कहाँ वस्तु एवं सेवाको उत्पादन, बिक्री तथा वितरण लागत कम पार्न व्यापारीहरूले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने सोच पटक्कै विकसित हुन सकेको छैन। यसैगरी वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पार्नुपर्छ भन्ने सोचको पनि विकास हुन सकेको छैन। उल्टो, नेपाली समाजलाई के चिन्तनले छोडेको छैन भने वस्तुको मुल्य जति चर्को (उच्च) राख्यो त्यस वस्तुको बिक्रीबाट त्यति नै बढी मुनाफा प्राप्त हुन्छ। यो परम्परागत र अति गलत सोच हो। यथार्थ के हो भने वस्तुको मूल्य जति कम भयो, मूल्य कम भएको कारणले जति बढी ग्राहकले खरिद गर्छन् त्यति बढी मुनाफा प्राप्त हुन्छ। अर्थात् वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पारेर, ग्राहकहरूको क्रय शक्ति वृद्धि गरेर, उनीहरूले बढी वस्तु खरिद गर्न सक्ने स्थिति सृजना गरेर व्यापारीहरूले बढी मुनाफा प्राप्त गर्न सक्छन्। यो नीति दीर्घ कालको लागि अति नै उपयुक्त हो। विश्वभरि र मुख्यगरी विकसित राष्ट्रहरूमा अति प्रचलित नीति हो।
विश्वविख्यात अमेरिकी खुद्रा भण्डार ‘वालमार्ट’ ले प्रतिस्पर्धीहरूको वस्तुको मूल्यभन्दा आफ्ना वस्तुको मूल्य कम पार्न हर सम्भव प्रयास गर्दछ। वस्तुहरूको मूल्य कम पारेर आर्थात् सस्तो पारेर बिक्री गर्ने हरपल प्रयास गर्दछ। वालमार्टले आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य (Mission) नै के राखेको छ भने ‘पैसाको बचत गर र रामरी जीवनयापन गर’ (Save money live better)। यस भनाइको आशय के हो भने हामीबाट सस्तोमा आवश्यकताका वस्तुहरू खरिद गरेर बचत गर अनि सजिलै आरामको जीवन गुजारा गर। वस्तुहरू सस्तोमा बिक्री गर्न अमेरिका मात्र होइन, विश्वभरि नै वालमार्टले ख्याति प्राप्त गरेको छ । सस्तोमा बिक्री गरेर बढी मुनाफा गर्नु वालमार्टको सफल व्यावसायिक रणनीति हो।
वस्तु एवं सेवाको मूल्य कसरी कम पार्ने?
वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पार्ने कार्य ज्यादै महत्वपूर्ण हो। यो कार्य गर्नका लागि अनेक किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान एवं खोज गर्नुपर्दछ। र त्यसै अनुसार वस्तुहरूको गुण, स्वरूप, प्रकृतिमा निरन्तर सुधार (Improvement) गर्दै जानुपर्दछ। नयाँनयाँ वस्तु र सेवा विकास गर्नुपर्छ।
वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पार्ने अनेक उपाय छन्। ती सबै उपाय यस छोटो आलेखमा उल्लेख गर्न सम्भव नभएकोले केही मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।
स्वीडेनको वहुराष्ट्रिय कम्पनी आइकिया (IKEA) को प्रमुख उद्देश्य ग्राहकहरूलाई सस्तोमा वस्तु उपलब्ध गराउनु हो। सन् १९४३ मा स्थापना भएको यो विश्वविख्यात कम्पनीले प्रमुख रूपमा घरायसी फर्निचर बिक्री गर्दछ। यसबाहेक भान्सा र गृह–शृङ्गारका सामग्रीहरू पनि बिक्री गर्दछ। आइकियाले तयारी फर्निचर बिक्री गर्दैन। खरिद गर्दा ग्राहकहरूलाई सस्तो होस् भन्ने उद्देश्यले अर्ध तयारी अवस्थामा रहेका फर्निचरहरू बिक्री गर्दछ। यसलाई यसरी बुझौं–आइकियाको स्टोरमा खरिद गरिएका फर्निचर जोड्नुपर्ने अवस्था (Ready-to-assemble) का हुन्छन् । खरिद गरिसकेपछि त्यो फर्निचर ग्राहकले घर वा कार्यालयमा लगेर जोड्नुपर्छ। एउटा बाक्सामा त्यो फर्निचरका अनेक अङ्गहरू तयारी अवस्थामा राखिएको हुन्छ। यसरी पूर्ण तयारी अवस्थमा फर्निचरहरू नराखेर आइकियाले सर्वप्रथम भण्डार लागत बचत गर्दछ। दोस्रो, फनिर्चर जोड्ने (Assemble) कार्य स्वयं ग्राहक वा खरिदकर्ताले गर्ने हुनाले आइकियाले जोड्ने लागत बचत गर्दछ। यसरी दुई किसिमका लागत (भण्डार लागत र जोड लागत) बचत गर्न सकिएकोले आइकियाले प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा सस्तोमा उपभोक्ताहरूलाई फर्निचर बिक्री गर्न सक्छ। अर्कोतिर ग्राहकहरूले आफ्नो श्रम उपयोग गरेर बचत गर्न पाउँछन्।
संसारभरि नै सस्तोमा फर्निचर बिक्री गर्ने भनी ख्याति आर्जन गरेको यो कम्पनी सन् २००८ देखि फर्निचर बिक्रीका लागि विश्वको नै सर्वाधिक ठूलो खुला भण्डार हुन पुगेको छ। पर्यावरणमैत्री फर्निचर निर्माण गर्नु पनि यो कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ। सन् १९४३ मा स्वीडेनमा यो कम्पनी स्थापना हुँदा यसका संस्थापक वा मालिक इनग्भार काम्प्राडको उमेर केवल १७ वर्ष थियो। यी सत्र वर्षीय युवकले फर्निचरको दुनियाँमा, जोडेर फर्निचर प्रयोग गर्न सकिने र लागत पनि घटाउन सकिने सोच ल्याएर तहलका मचाए। यिनको यो खोज वा प्रयोग नितान्त नौलो थियो। उत्पादन लागत घटाउने ठूलो आविष्कार थियो।
विश्वभरि (सन् २०१७ सम्म) आइकियाका ४ सय १५ भण्डार ४९ राष्ट्रमा सञ्चालित छन्। यसले १२ हजार थरीका वस्तुहरू बिक्री गर्दछ। विश्वभरि नै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि काठको हुने कुल उपभोगमा आइकियाको हिस्सा १ प्रतिशत छ। यसरी संसारभरिमा नै आइकिया निर्माणका लागि काठको सर्वाधिक ठूलो प्रयोगकर्ता भएको छ। आइकियामा लगभग १ लाख ५० व्यक्ति रोजगारी छन्।
आइकियाका संस्थापक इनग्भार काम्प्राड, फोब्र्सले दिएको जानकारी अनुसार, सन् २०१५ मा विश्वका दश अति धनीमध्ये एक हुन पुगेका थिए। उनको सम्पत्ति ४० बिलियन डलर रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
अनेक लागत घटाएर वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पार्ने तरिकामध्ये एक हो, खरिद–बिक्री प्रक्रियामा ग्राहकलाई पनि केही कार्य गर्न लगाउनु। अर्थात खुद्रा भण्डारहरूले खरिदकर्तालाई नै वस्तु छान्न, पैक गर्न र पैसा दिने स्थानसम्म आउन लगाउनु। फास्ट फूड एवं अन्य रेस्टुरेन्टहरूले ग्राहकलाई नै काउन्टरमा आएर खाद्यवस्तु लैजान लगाउनु, आदि।
अनेक किसिमका अध्ययन गरेर विभिन्न किसिमका लागत कम पारेर उपभोक्ताहरूलाई सस्तोमा वस्तु एवं सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। तर अफसोच! हामी कहाँ वस्तु एवं सेवाको मूल्य सकेसम्म कम पार्नुपर्छ भन्ने सोचले महत्व पाउन सकेन। व्यापार लामो समयसम्म परम्परागतरूपमा चल्यो र अहिले पनि चलि नै रहेको छ। यो कारणले गर्दा पनि नेपालमा जीवनयापन लागत ज्यादै चर्को हुन पुगेको छ। सामान्य आम्दानी भएको व्यक्तिले नेपालमा अझै काठमाडौंमा जीवन गुजारा गर्न ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।
विकसित मुलुकहरूमा र खासगरी अमेरिकामा मानवीय कोरा श्रमलाई मेसिन र प्रविधिद्वारा लगभग पूर्णरूपमा विस्थापित गरिएको छ। र यसरी मानवीय श्रम विस्थापित गरेर, वस्तु एवं सेवाको उत्पादन लागत कम पारेर, वस्तु एवं सेवाको मूल्य कम पार्ने प्रयास गरिएको छ। अमेरिकाका कतिपय खुद्रा भण्डारहरूमा वस्तु खरिद गरेपछि काउन्टरमा पुगेर कुनै व्यक्ति (Cashier) लाई पैसा भुक्तान गर्नुपर्दैन, मेसिन (Self-check out) द्वारा भुक्तान गरे हुन्छ। यसरी व्यापक मात्रामा मेसिन र प्रविधिको प्रयोग गरेर अमेरिकामा वस्तु एवं सेवाको बिक्री मूल्य कम पारेर उपयोक्ताको जीवनयापन लागत (Living costs) कम पार्ने प्रयास गरिन्छ।
वस्तु वा सेवाको मूल्य कम पारे सामान्य आय हुनेको जीवन गुजारा कसरी सरल पार्न सकिन्छ त्यसबारे स्थानीय सरकारहरूले गम्भीरतापूर्वक सोंच्न आवश्यक हुन आएको छ। जुन किसिमले नेपालको जीवनयापन लागत अति नै महँगो छ, वस्तु र सेवाको मूल्य आकाशिएको छ, त्यसै किसिमले नेपाललाई रेमिट्यान्स को सहयोग प्राप्त नभइदिएको भए नेपालको स्थिति पनि रोबर्ट मुगाबीकालीन जिम्बाब्वेजस्तो हुने थियो । सन् २००८ मा जिम्बाब्वेमा मुद्रास्फीति (Inflation) ७९ अर्ब प्रतिशत पुगेको थियो ।